यो घटना सुन्दा सुरुमा त अचम्म लाग्छ! एक सात वर्षीय बच्चाको मुखबाट ५२६ वटा दाँत निकाल्यो – " कञ्चनजंगा News "
यो घटना सुन्दा सुरुमा त अचम्म लाग्छ! एक सात वर्षीय बच्चाको मुखबाट ५२६ वटा दाँत निकाल्यो
No Comments on यो घटना सुन्दा सुरुमा त अचम्म लाग्छ! एक सात वर्षीय बच्चाको मुखबाट ५२६ वटा दाँत निकाल्यो
एजेन्सी, १६ साउन । भारतको चेन्नाईमा एक अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो घटना सुन्दा सुरुमा त अचम्म लाग्छ तर स-प्रमाण देखेपछि नापत्त्याइ राख्न पनि सकिन्न । चेन्नाईस्थित सविता डेन्टल कलेजका डाक्टरहरुले एक सात वर्षीय बच्चाको मुखबाट ५२६ वटा दाँत निकालेको दाबी गरेका छन् । डाक्टरहरुका अनुसार मानिसको मुखबाट यति धेरै दाँत निकालिएको यो विश्वकै पहिलो घटना हो ।
उनीहरुले यस स्थितिलाई कम्पाउन्ड कम्पोजिट अन्डोटोम नाम दिएका छन् । डाक्टरहरुका अनुसार यस्तो अस्वाभाविक विकास मोबाइल टावरको रेडियसनको कारण पनि हुन सक्ने भारतीय अनलाइन द हिन्दूले लेखेको छ ।
अपरेसन गरेको तीन दिनपछि बच्चाको अवस्था सामान्य बन्न थाल्यो । अपरेसनपछि त्यो बच्चाले आफूलाई अब पहिलेको जस्तो दुखाइ नभएको बताएका छन् । डाक्टरहरुले यस्तो अस्वाभाविक स्थिति आउनुको कारण मोबाइल टावरबाट निस्किने रेडियसन वा जेनेटिक डिसअर्डर हुनसक्ने बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः सुत्केरी व्यथा लागेपनि बच्चा जन्माउन नसक्दा २० वर्षीया आमा र पेटभित्र रहेको बच्चा दुवैको स्वास्थ्यचौकी मै मृत्यु….हुम्लाको सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूतिका लागि ल्याइएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान प्रसूतिका लागि सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा भर्ना भएकी वडा नं ४ साँयागाउँ निवासी २० वर्षीया अनरुपा टमटाको बिहान १० बजे मृत्यु हो । टमटालाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि बुधबार बिहान ४ बजे प्रसूतिगृहमा ल्याइए पनि दुर्गम क्षेत्रमा उपकरण नहुँदा मृत्यु भएको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख देवेन्द्रवीर मगियाले जानकारी दिनुभयो ।
मृतक टमटालाई बुधबार बिहानबाट एक्कासि सुत्केरी व्यथा लागेसँगै स्वास्थ्यचौकीमा पु¥याइए पनि बच्चा जन्माउन नसक्दा आमा र पेटभित्र रहेको बच्चा दुवैको मृत्यु भएको प्रमुख मगियाले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूतिका साधनको कमीले आमा र बच्चा दुवैलाई बचाउन नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दुर्गम जिल्ला हुम्लाका प्रायः स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी आमाका लागि औषधि, उपकरण नहुनुले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । जिल्लाका महिलाले सानै उमेरमा विवाह गरेर छिटो बच्चा पाउने हुँदा उनीहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
← योगेश भटटराईलाइ पर्यटन मन्त्री बनाइएपछि सोही पार्टीको केन्द्रिय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको नकारात्मक प्रतिकृया → नयाँ आयो कानुन १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई मदिरा बिक्री वितरण नगरिने ,खुद्रारुपमा मदिरा बिक्री गर्नेले साँझ ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म बिक्री गर्न पाउने